Shiinaha GMP FDA Warshad soo saaraha sariirta oo saqaf ah | Qiangdi
Sawirka qaab dhismeedka jet hoosta ficilka xoogagga qeybaha giraanta qeybinta iyo awoodda bartamaha ee taageere qabyo ah, maaddada ayaa ku imaaneysa sariir dheecaan leh oo ku jirta gudaha miraha diyaaradda. halkaasna lagu helayo budo kala duwan oo kala duwan.
Badeecadu waa pulverizer sariir dheecaan leh oo leh hawo cadaadis oo ah dhexdhexaad wax burburinaysa. Jirka milixdu wuxuu u qaybsan yahay 3 qaybood, oo kala ah aagga wax lagu burburiyo, aagga gudbinta iyo aagga qiimeynta. Aagga Darajaynta waxaa la siiyaa shaag shayga, xawaaraha waxaa lagu hagaajin karaa beddelaha. Qolka burbura wuxuu ka kooban yahay mashiinka wax lagu burburiyo, quudiyaha, iwm. Qalabka giraanta ee sirta bixiya ee ka baxsan haanta burbura waxay kuxirantahay mashiinka burbura
Maaddadu waxay ka galeysaa qolka burburka iyada oo loo marayo sheyga sheyga. Hawada cadaadiska ayaa ku qulquleysa qolka burburka iyadoo ku socota xawaare sare iyadoo loo marayo afarta nozzles ee sida gaarka ah u qalabeysan. Maaddadu waxay ku kasbatay dardargelinta qulqulka qulqulka ultrasonic iyo soo noqnoqoshada saameynta iyo isku dhaca barta dhexe ee isku xirnaanta qolka burburka illaa laga jajabayo. Waxyaabaha la jajabiyey waxay soo galayaan qolka qiimeynta iyadoo la buuxinayo. Sababtoo ah giraangiraha dhibcaha waxay ku wareegaan xawaare sare, marka maaddada kor u kacdo, jajabku waxay ku hoos jiraan xoogga bartamaha oo laga sameeyay rotors qiimeynta iyo sidoo kale awoodda bartamaha ee laga abuuray nafaqada hawada. Marka qurubyadu ka hooseeyaan xoogga bartamaha ka weyn kan xuddunta, jajabyada aan weyneyn ee ka weyn dhexdooda kuwa loo baahan yahay dhibcaha ma geli doonaan qolka gudaha ee shaagagga qiimeynta waxayna dib ugu laaban doonaan qolka burburka si loo burburiyo. Qaybaha ganaaxa ee u hoggaansamaya dhexroorka jajabyada dhibcaha ee loo baahan yahay ayaa soo gali doona shaagagga shaandheynta oo waxay u qulqulayaan kala-soocaha duufaanka ee qolka gudaha ee shaagagga shaandheynta oo leh hawo-qaadashada oo uu ururinayo ururiyaha. Hawada la sifeeyey ayaa laga sii daayaa qalabka hawada gala ka dib daaweynta bacda miiraha.
Qaybaha waxay gaari karaan 0.5-10 micron iyadoo ay ugu wacan tahay xawaaraha hawada sare ee aadka u sarreeya iyo xoog saameyn saameyn leh.
2. Qalabaynta kala soocida ayaa laga heli karaa pulverizer-ka dhexdiisa, kaas oo loo yaqaan 'Qur'aanka' ashyaa'da ah ee ka soo baxa qalabka wax lagu farsameeyo si meertaysan loogu soo saari karo si loo soo saaro badeecooyin dhammaaday oo leh ganaax isku mid ah iyo dhexroor yar oo dhexdhexaad ah
Naqshadeynta wax soo saarka, xulashada maaddada gabi ahaanba iyada oo la raacayo shuruudaha heerka GMP / FDA.
Hawada hawadeedu waa mid aad u nadiif ah oo la socota habka shaandhaynta. Qaabdhismeedka gudaha ee isafgaradka si loo sameeyo shiididda wareegga wareegga. Laga soo bilaabo alaabta ceeriin ilaa soosaarka joogtada ah ee alaabada la dhammeeyay, qasiddu waxay u baahan tahay waqti aad u gaaban laakiin waxay soo saartaa waxtar sare iyo hawlgal joogto ah.
Qaab dhismeedka qalabku waa mid fudud, gudaha iyo dibaddaba aad u dhalaalaya angle xagal aan dhinnayn, oo sahlan in la nadiifiyo.
6.xirashada hoose: Sababta oo ah saameynta burburka waxaa sababa saameynta iyo isku dhaca walxaha, walxaha xawaaraha sare ku dhaca dhif iyo naadir ah ayaa ku dhaca darbiga. Waxay quseysaa in la burburiyo waxyaabaha ka hooseeya Miisaanka Moh ee 9.
7.Baadhitaanada warshadaha ee khuseeya iyo shahaadooyinka, sida FAT.SAT.DQ.OQ.IQ.PQ.
Naqshad faahfaahsan oo qumman oo loogu talagalay heerka GMP / FDA
1.Kuleylka xamuulka qaada dabool daboolka si looga fogaado waxyaabaha wasakhaysan.
Dhammaan matoorada daboolka leh si loo ilaaliyo loona ilaaliyo nadaafadda alaabada. Naqshadeynta xirfadeed.
3.Mashiinka mashiinka oo dhan oo lala xiriiro alaabada waa inuu ahaadaa bir bir ah, xagal dhintay iyo wasakh la'aan.
Qaswada sambabadu waxay ka kooban tahay kombaresarada hawada, soo-celinta saliida, haanta gaaska, qalajiyaha qaboojiyaha, miiraha hawada, sariirta dareeraha wadata ee sariiraha, kala-sooca duufaanka, aruuriyaha, hawo-joojinta iyo kuwa kale.
Nidaamku wuxuu qaataa xakamaynta shaashadda taabashada caqliga, hawlgalka fudud iyo xakamaynta saxda ah. Nidaamkani wuxuu qaataa PLC heer sare ah + habka xakamaynta shaashadda taabashada, shaashadda taabashadu waa terminalka hawlgalka ee nidaamkan, sidaas darteed, aad ayey muhiim u tahay. In si sax ah loo qabto dhammaan furayaasha 'shaqada shaashadda taabashada si loo hubiyo hawlgalka saxda ah ee nidaamkan.
→Waxyaabaha ceyriinka ah ee loo yaqaan 'MEFENAMIC ACID' oo ka socda dhulka 60Mesh inuu noqdo D90 <5.56um
→ECONAZOLE NITRATE walxo ceeriin ah oo ka socda dhulka 60Mesh inuu noqdo D90 <6um
→MANGO POWDER walxo cayriin oo ka socda dhulka 70Mesh wuxuu noqonayaa D90 <10um (ku habboon cunnooyinka xasaasiga u ah kuleylka.)
→POWDER shaaha alaabta ceeriin ee ka soo baxda dhulka 50Mesh illaa D90 <10um
Badanaa waxaa loo isticmaalaa Farmashiyaha, Cuntada, iyo Warshadaha Qurxinta.
Hore: Nooca Caangaarka ah Nooca Cajaladda Jet Mill
Xiga: Jet Mill WP Nidaamka – U adeegso aagagga Kiimikada